San Fermín de los Navarros iyo kaniisadeeda | Bezzia
Susana godoy | 17/06/2022 12:00 | safarka
Marka aan ka hadalno San Fermín de los Navarros, markaa waa inaan sheegnaa kaniisadda. Sababtoo ah waa mid ka mid ah macbadyada lagu dhawaaqay 'hantida xiisaha dhaqanka', dib ugu noqo 90-meeyadii. Sidaa darteed, haddii aadan weli fursad u helin inaad eegto, waa waqtigii aad naftaada u qaadi lahayd. iyada.
Taasi waa sababta aan kuugu nimid inaan kuu sheegno sida aad ku tagi karto iyo wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato kaniisad sida San Fermín de los Navarros. sababtoo ah mararka qaarkood Waxaan leenahay meelo aan la rumaysan karin oo naga dhow oo aan malayn karin. Waxay u muuqataa in meeshani ay ka mid tahay iyaga oo dabcan, aad jeclaan doontaa markaad haysato hortaada.
1 aaway kaniisaddii
2 Sida loo tago San Fermín de los Navarros
3 taariikhda kaniisadda
Waa in la sheegaa in kaniisadda San Fermín de los Navarro ay ku taal Chamberí. Tani waa mid ka mid ah degmooyinka Madrid oo loo habeeyay wadar ahaan 6 xaafadood waxaadna ka heli doontaa qaybta dhexe. Waa mid ka mid ah meelaha la odhan karo waxaa jira isku-dhafka naqshad-dhismeed oo aad uga badan. Sababtoo ah waxaad ku arki doontaa sida ay u jiraan dhismayaal casri ah laakiin sidoo kale neo-Gothic iyo sidoo kale neo-Mudejar. Isku-dar ah oo aad awood u yeelan doonto inaad si tallaabo tallaabo ah u ogaato inta u dhaxaysa guryaha laakiin sidoo kale inta u dhaxaysa dhismayaasha ugu muhiimsan ee meesha. Haddaba, la yaab ma leh in qaar badan oo iyaga ka mid ah lagu sheego inay yihiin taallo qaran. Waxaa ka mid ah kaniisadda maanta xiddigta ka ah booskeena, laakiin sidoo kale dhowr dugsi, magangalyo iyo convents.
Sida loo tago San Fermín de los Navarros
Markaad joogtid garoonka diyaaradaha iyo T4, waxaad ku imaan doontaa qiyaastii 90 daqiiqo bas. Dabcan, haddii aad ku sugan tahay aagga beerta madadaalada, waxaad haysataa oo kaliya 46 daqiiqo ka hor. Taasi waa sababta basaska taga goobtan ay u yihiin 147, 150, 16 iyo 7. In kasta oo ay habboon tahay in mar walba la hubiyo ka hor, haddii ay dhacdo isbeddel ku yimaada safarka.
Haddii taa beddelkeeda aad rabto inaad raacdo tareen, marka laga bilaabo madaarka Madrid ilaa kaniisadda waxaa jira 48 daqiiqo. Laga soo bilaabo aagga Alcampo waxay ka badan tahay 56 daqiiqo. Tareenka C10 iyo C7 waa kuwa ku geyn doona meeshaad u socoto. Dabcan, sidaan soo sheegnay, mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay jiraan adeegyo badan ama laga yaabo inay yareeyaan oo ay ku haboon tahay in la hubiyo jadwalka si aysan u joogin dhulka. Joogsiyada ugu dhow ee meesha aan u socono waa Rubén Darío, Almagro, Colón, Castellana ama Gregorio Marañón. Tan iyo iyaga laga bilaabo ilaa kaniisadda waxaa jira kaliya 3 daqiiqo socod.
Waxaa la sheegay in la sameeyay iyada oo ay ugu mahadcelinayaan koox Navarrese ah oo ku noolaa Madrid oo si xooggan u heellan San Fermín. Sidaa darteed, Julaay 7 kasta mar walba way kulmaan, markaa waxay go'aansadeen inay abuuraan meel go'an ka dib markay marar badan soo wareegaan. Tan iyo 1684 waa markii ay abuuraan shirka laakiin ma noqon doonto ilaa 1746 markii kaniisaddii ugu horreysay ee Navarros la dhisay markii ay heleen deganaanshaha tirada Monterrey. Dabcan, muddo ka dib waa la dumiyey. Muddo ka dib, 1886, kaniisadda maanta aan ognahay ayaa la dhisay.. Kaniisaddani waxay ku taal qaybta dhexe, dhinac kastana, waxaa jira meelo beero ah. Dhexdooda waxaa lagu arki karaa daaradaha dhinacyadooda.
Aagga bannaanka, waxaad arki kartaa sida lebenku u yahay protagonist, taas oo noo horseedaysa inaan ka hadalno kharashkiisa hooseeya laakiin sidoo kale dhismihiisa degdega ah. Laakiin gudaha qaabka gothic wuxuu ahaan doonaa hadda, oo leh saddex nafood iyo khaanad xiddigo leh. Meesha allabariga ee May waxaa la sameeyay qarnigii XNUMXaad, muraayadda daaqadaha waxay u taagan tahay jaakada hubka ee Navarra. Markaa, waxaas oo dhan iyo in ka badan, waa waqtigii la joojin lahaa meel sidan oo kale ah. Miyaadan u malaynayn?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » nololeedka » safarka » San Fermin ee Navarrese
isku darka silsiladaha H&M ee aanad seegi karin